प्रधानमन्त्रीज्यु, आफैले मा’रेको संसदबाट तपाईँले विश्वासको मत माग्ने नै’तिक अधि’कार छ ? (हेर्नु’होस् संसद वैठकको यो भिडियो: ) – Sadhaiko Khabar
प्रधानमन्त्रीज्यु, आफैले मा’रेको संसदबाट तपाईँले विश्वासको मत माग्ने नै’तिक अधि’कार छ ? (हेर्नु’होस् संसद वैठकको यो भिडियो: )
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख २७, २०७८ समय: १६:४९:४२
काठमाडौ/ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ले आफैले विघटन गरेको संसदवाट विश्वासको मत माग्ने नै’तिक अधिकार नभएको बताएका छन् । उनले कानु’नले नदिए’को र असंवैधा’निक रुपले संसद विघ’टन गरेका प्रधानमन्त्रीले सोही संसदवाट विश्वासको मत लिने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन् । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपा’उने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि विश्वासको मत लिन खोजे’को बताए । तर, यो प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक अधिकारभित्र पर्ने कुरा भएकोले यसको सम्मान गर्ने उनको भनाई छ । उनले मुलुकलाई अस्थि’रतातर्फ धके’ल्ने काम फेरि भैरहेको भन्दै चि’न्ता व्यक्त गरे । उनले आफूहरुले धेरै प्रतिकु’लतासँग जु’धेर संविधान बनाएको स्मरण गराए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै अगाडी ओलीले फेरी संसद विघ’टन गर्छु भनेको कुरा पनि स्मरण गराएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदि’न आग्रह गर्दै नयाँ सरकार बनाउन अघि बढ्न आव्हान समेत गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत दिने संसदको विशेष अधिवेशनमा बोल्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहु’मतको सरकार निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहु’मतको सरकार निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहुम’तको सरकार बनाउन लाग्नुपर्छ ।’ ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटा’एर नयाँ सरकार बनाउन देउवाको जो’ड थियो । उनले फेरि अल्प’मतको सरकार बन्ने अवस्था अगावै बहुमतको सरकार निर्माणको आव्हान गरेका हुन् । बाँकी सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा हेर्नु’होस् :-